कुनै बेला अखिल क्रान्तिकारी, मुसिकोट क्याम्पसको म अध्यक्ष, प्रबिर डाँगी सचिव, गणेश चिन्तन कोषाध्यक्ष हुँदा उहाँ सहसचिव हुनुहुन्थ्यो । हाल न्यु मुनलाइटका प्रिन्सिपल खडक कुँवर सरको घरमा हाम्रो अन्तिम बैठक भएको ताजै सम्झना छ ।
इतिहास भनेको इतिहासै हो । खोतलेर अन्यथा अर्थ लाग्नु हुँदैन । हामीले कठीनरुपमा राजनीतिक यात्रामा खटिन सकेनौँ । पार्टी, संगठन छोड्यौँ । उहाँ अनवरत क्रियाशील हुनु भो । आज प्रदेश नम्बर ६ को मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा पुग्नुभएको छ । मान्छेको मनै त रैछ, बधाई नै बधाईको बाढीमा आज आफैं पनि २०७४ मा प्रतिकूलताको बीचबाट थप एउटा बधाई थप्ने मनस्थितिमा पुगेछु । कुनै स्वार्थको लागि होइन । शक्तिको आराधना र चाकडीको रुपमा पनि नबुझिदिनुहोला ।
संगठनको आन्तरिक जीवनमा के छ थाहा छैन । बाह्य रुपमा हेर्दा सरदर राजनीतिज्ञमा जस्तो अथाह दाउपेचपूर्ण कुटनीतिक कपट उहाँमा झल्कदैंन । भेट हुँदा बोलाउनु हुन्छ । गाडीमा भए गाडी नै रोकेर के छ खबर भन्नुहुन्छ । कहिलै बसमा भेट हुन्छ । कहिल्यै हिंड्दाहिंड्दै बाटोमा । मित्रवत् व्यवहार गर्नुहुन्छ । यत्ती हो वर्तमान । भेट हुँदा, अतित सम्झँदा मुन्टो बटार्ने, देखेपनि नदेखे झैँ गर्ने जाली, झेली नेतृत्वभन्दा सरदर जनतासँग नअलग्गिएर न्यूनतम यत्ति व्यवहार गर्नु पनि नेपाल र नेपाली जनताले सन्तोषै मान्नुपर्ने अवस्था भएको छ । यही वर्तमान र विगत सम्झेर बधाई दिएको ।
प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न भएपनि नेपालजस्तै देश लक्जेम्बर्गको प्रतिव्यक्ति आय १ लाख पाँच ८३९ डलर पुग्दा शासकीय असफलताले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ७६८ मै सीमित छ । दैनिक २ डलभन्दा कम आम्दानी हुने नेपालीको जनसंख्या २१.६ प्रतिशत । प्रत्येकको टाउकोमा २४ हजार ऋणको भारी । ७१ अर्ब भन्दा बढी घाटामा निर्मित साढे १० खर्बको बार्षिक बजेट । वैदेशिक ऋण मात्रै ६ खर्ब ९२ अर्ब २ करोड । बार्षिक बजेट जत्तिकै व्यापार घाटा । रेमिट्यान्स आश्रित परनिर्भर अर्थतन्त्र । समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य हेर्दा देश हाइटी, सुडान, तान्जनिया जस्तै हुने आशंका । त्यहीमाथि खर्चिलो संघियता । सैद्धान्तिक रुपले पनि Coming together नभै Holding together को दर्शनबाट निर्मित संघीय खाकाले नेपाललाई पनि इथियोपिया, नाइजेरीयाको अवस्थाम पुर्‍याउने आशंका ।
र, जनसंख्याको ५२ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबहरुको बसोबास भएको ६ नम्बर प्रदेश । विगत द्वन्द्वको आधारभूमि । जनताका अपेक्षा, नेतृत्वको शैली, राज्य संरचनाका अवयव र विश्यव्यापीकरणको बीचमा आकाश जमिनको फरक ।
यस्तो कठिन अवस्थामा प्रदेश मन्त्रीजस्तो पदमा आसिन हुनुभएकोमा १/२ जना आफ्ना पकेटका मान्छेहरुलाई यताउति समायोजन गर्नमा सीमित नभई १० बर्षे युद्धको समयमा जनताको बीचमा बाँडिएका अनगिन्ति सपनाका खाकाहरु प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभामा गुन्जायमान भई विगत इतिहासमा गोरखाका राजाले समेत तिरो बुझाउन आउने शक्तिशाली कर्णाली प्रदेश पुन: वर्तमानमा पनि विकास, समृद्धि, शान्ति र सुशासनमा नमुना प्रदेशको रुपमा स्तरोन्नति भई ५ वर्ष पछि देशकै समुन्नत प्रदेश बनाउने काममा सफलता मिलोस् ।
सफलताको हार्दिक शुभकामना ! भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्री विमला केसीज्यूलाई !
[मुसिकोट नपा ४, सोलाबाङ्ग, रुकुम]